Halgankii Loo Soo Maray Curinta Qaranimada Soomaaliyeed | Arimaha Bulshada
June 22, 2007 at 7:28 pm | Posted in somali | Leave a comment
Soomaalidu waxey u soo martay jiritaankeeda jid dheer oo dhiig badan ku daatay. Waxaa la aaminsan yahay in Faraaciintii asalkeedi hore
ay ka soo jeedey dhinaca Soomaalida. Soomaaliduna waxey waqtigaas ka mid ahayd qowmiyadihii safka hore kaga jirey aduunka. Webiga
Nile wuxuu ahaa jidka keliya ee isku xir jirey Soomaalida iyo Masaarida. Dhulka buuraleydaa ee afka webiga Nile uu ku yaal ayaa degaan u
ahayd Soomaalida, waxeyna boqortooyo xoogan ku lahayeen degaankaas, waxaana xaruun u ahayd degaanka loo yaqaan Shewa oo
markaas aysan Addis Sababa aysan ku jirin. Waxaa degaanada ku teedsan buuraleydaas oo ku kala noolaa qowmiyadaha Soomaalida,
Oromada, Amxaarada, iyo Danaakiisha (gaalla), waxeyna dadkaasi ahayeen kuwo aan kala tiro badneyn.
Waxaa soo can baxay boqortooyadii Amxaarada oo dhamaadkii waqtigii faraciinta bilaawday iney sameystaan xiriir aqoon kororsi ah ee la
yeesheen dowladihii boqortooyadihii markaas jiray. Sidaasna Amxaaradu waxey xagga aqoonta iyo farsamada kaga hormartay
qowmiyaadkii kale oo iyagu aan dadaal u gelin la socodka aduunka kale inta ku dhow moyaane. Markii Amxaaradu u talaabtay dhinaca
Dhulalka Carabta waxey ka heshay aqoonsi, waxaana loo bixiyey magaca Xabashida, sidoo kale markii ay la kulmeen badmareenada reer
Yurub h oo markaas u badnaayeenGreek, waxey ka kasbadeen magaca Ethiopia oo la macna ah “Wejigii Gubtey”, sheekooyinkoodana
waxey gaaartey Yurub.
Xiriirkii ay la yeesheen dadka ku nool aduunka kale waxey Amxaarada ku soo kordisey xeelado dagaal, sameynta qalabka dagaalka iyo
adeegsiga fardaha oo loo isticmaalayo gaadiid ahaan. Markii tayadii Amxaarada ay kor u kacday ayey bilowday iney dhulka buuraleydaa oo
dhan u taliso, waxeyna bilowday in ay qowmiyaadka kale ay dulaan ku sikiso oo ay ku shubto dhulka hoose oo kuleylka badan. Qowmiyadihii
kale waxey bilaabeen iney ka sikadaan sida Danaakiisha, qaarna ay ogoladaan xukunka Amxaarada sida Oromada, qaarna waxey goosteen
iney la dagaalamaan sida Soomaalida.
Boqortooyadii Xabashida ee Axzum, jirteyna 250 sanno ka hor dhalashadii Diinta Kirishtaanka waxey xiriir xoogan la lahyd Greek oo ahayd
xilgaas dowlada ugu xoog iyo aqoonba sareysay Yurub, waxeyna si joogta ah uga heli jirtey hubka iyo saanada waqtigaas dagaalka loo
adeegsan jirey. Soomaalida oo qalabka dagaalka looga awood roonaa waxaa lagu qasbay in lagu soo riixo dhinaca Shewa, halkaasna lagu
soo aruuriyey xoogooda.
Qarniyaal kadib dagaalo socdey waxey Xabashidu ku guuleysatay iney burburiyaan boqrtooyadii Soomaalida waxayna ay noqdeen wax u
cararay xeebaha Soomaalida, degaankii Shewa ku dhowaa ee Harar, iyo qaar u galay degaanka Oromada oo qowmiyadaas ku biiray
ogolaadeyna Xukunkii Amxaarada.
Xiriirka u dhexeeyey Amxaarada iyo Greek oo aad u qoto dheeraa ayaa wuxuu sababay in Amxaaradu ay qaadato diinta Masiixiga, oo ahayd
Orthodox. Amxaaradu waxey ahayd dadkii ugu horeyey dadka Afrika oo qaatay diinta Kirishtaanka, waxeyna taas u keentay in laga qadariyo
wadamada Yurub. Boqortooyadii Xabashida oo aad isku mahdisay ayaa waxey qorshe la gaartey Yurub si dhulka siman ee Soomaalidu
xoolaha ku dhaqato ilaa xeebaha Soomaalida ay ka mid noqdaan boqortooyada Xabashida. Xilligaas waxaa Yurub looga adkaaday Greek,
waxaana soo baxday boqortooyadii xooga weyneed ee Roomaanka oo waqtigeedii u dambeeyey la saan qaadey dhalashadii diinta
Kirishtaanka. Boqortooyadii Roomaanka waxaa Greek dhexmaray dagaalo qaraar, iyada ayaana dumisey boqortooyadii Greek, mana aysan
ahayn mid soo dhaweysey diinta Kiristaanka oo Nebi Ciise iyadaa surtay iskutilaabta ama macatabka oo uga tegey aduunka. Xabashida
xiligaas waxaa soo foodsaaray cabsi, waxaana meesha ka baxay kaalmadii ay ka heli jirtey Greek oo Yurub looga awood roonaaday,
dalkeedina la qabsaday. Halkaasna waxaa ku damey dulaankii iyo damacii Xabashida ay ku qorsheyneysey iney ku qabsato dhamaan dhulka
Soomaalidii ku soo qaxday Harar iyo kuwii horay u joogey waxey degaankaas ka abuurteen xukuumad awood yar, waxeyna ku galeen
tabaasheyn, iyo is urursi qaatay qarniyaal. Waxey soomaalidu qaadatay Diinta Islaamka qarnigii 7aad, waxeyna heshay afkaaro cusub,
xilado dagaal iyo kaalmo uga yimid wadamada Islaamka, gaar ahaan kuwa Carabta, Persia, iyo Turkey. Soomaalida oo ka soo kabatay
firxadkii iyo jabkii ay u geysatay Amxaarada kumanaan sanno ka hor ayaa intii ku hartay degaankii Shewa iyo Harar waxey sannadkii 1528
mar labaad dagaal culus la galeen Boqortooyadii xabashida. Dagaalkaas waxaa hogaaminayey halyeygii Axmed Ibraahim Gurey oo 15 sanno
Xabashida dagaal kula jirey, burburiyeyna awoodii boqortooyada Xabashida ilaa ay ka codsadaan ciidan shisheeye oo uga yimid Purtaqiiska,
Griik iyo wadama kale oo Yurub iyagoo wata madaafiic iyo hubka qarxa oo kala du-duwan.Wixii dagaaladaas ka dambeeyey Xabashidu af ka
hadal mooye waa ayey joojisey dulaankii ay ku fidsaneysay dhulka. Boqoorkii Menelik II oo Etoopiya xukumayey inta u dhexeysa 1868
ilaa1913 oo la socdey waraka Yurub ayaa markii uu arkay in dhulka Soomaalida Yurub ay kala boobeyso ayuu weerar ku qabsaday degaankii
Harar sannadkii 1890s.
Markii Soomaalidu ay ka soo jabtay dhulka buuraleydaa ee webiga Nile soona degtey xeebaha Zeylac ilaa Kismaayo, ayaa Masaaridii hore
waxey u bixisay dhulka Soomaalida dhulkii dadka madow ee Berber. Soomaalida inteeda badan waxey ku noolaayeen dhulka gudaha ah,
degaanka xeebuhuna wuxuu u badnaa dhul banana oo aan sidaas loo degganeyn. Qarnigii 7aad ayaa Soomaalida waxaa diinta soo
gaarsiiyey wadaado Carbeed oo ka soo baxsaday cadaadiskii ay ku hayeen qabaa’ilada Carabta waaweyn oo ka soo horjeedey diinta
Islaamka oo lid ku ahayd dhaqankooda. Diinta Islaamka ayaa si fudud ugu fidday dhamaan dhulka Soomaaliyeed oo baaxad ahaan aad u
balaarnaa. Wadaadadaas yimid ka sokow xiriirka Carabta iyo Soomaalida ma hayn mid isaqoonsi jid u furay, wixii mararkaas ka dambeeyey
Soomaalida degta xeebta iyo badmareenada Carabta waxaa u dhexeeyey dhaqanka Islaamka oo u badnaa dhaqanka Carabta, waxeyna
Soomaalida kala kulmeen soo dhaweyn. Carabta waxey daneyneysay ganacsi iyo iney xeebaha Soomaaliyeed ka dhigato meel ay ku soo
xirtaan marakiibtoodu. Waxey kaloo daneynayeen dadka madow oo ay adoon ahaan ay uga ganacsadaan. Soomaalidu marna ma jecleyn in
Carabta ay is dhexgalaan oo ay wadaagaan guur ama ay wada degaan.
Waxaa qarnigii 7aad dalka soo galay qaxooti ka yimid dhinaca Yemen, xeebaha Bari ee Soomaalidana ka abuurtay xukuumad uu ka taliyo
Suldaan. Waxaana qarnigii 17aad qabsaday boqortooyadii Cumaan ee ka jirtay Muscat oo ku taal qaliijka Carabta. Sannadkii 1866 ayaa
maamulkaas waxaa dib u qabsaday Boqortooyada Zanzibaar oo ka soo go’day Boqortooyada Cumaan. Wadanka Cumaan waxey
qaranimadiisu bilaabtay 661, waxeyna xukunka islaamka ku biirtay 697 oo ay ahayd wadan madax banana oo Caraba.Wixii ka dambeeyey
sannadkii1744 boqortooyadii Cumaan waxey ku fidday Khaliijka Carabta iyo Peershiya, Pakistaan iyo geeska Afrika ilaa Zanzibaar. Markii uu
geeriyoodey Suldaan Saciid bin Suldan Al-Busaid sannadkii 1856 ayeey wilashiisa ku dagaalameen dhaxaltooyada, waxeyna u kala jabeen
laba qeybood. Carqaldaas ay ku kala qeybsameen darted baa markuu Sannadku ahaa 1861 ayaa qeyb xukunka ka mid ah waxay noqdeen
qeyb ka go’day xukunkaas waxayna ka taliyeen Zanzibaar iyo xeebta bariga Soomaalida.
Bortuqiiska oo sahan ku ahaa helida dalka India ayey maraakiibtiisu si joogtaa ugu xiran jireen xeebaha Koofurta Soomaalida, wuxuuna
magacaabay magaalooyinka Mugadishu, Merca, iyo Brava, oo uu ka sameystay degaano qarniyadii 15aad iyo 16aad. Inkastoo ujeedadiisu
ahayd mariin uu u helo maraakiibtiisa ganacsiga haddana wuxuu magaalooyinkaas iyo xeebaha ku dhowaa ka sameeyey qalcado, wuxuuna
ku soo rogey xukunkiisa ilaa ay ka qabsadaan boqortooyadii Cumaaniyiinta ee ka talineysay Zanzibaar.
Waxaa xeebaha Soomaaliyeed ee Zaylac iyo kuwa kale oo ku teedsan Badda Cas, iyo koofurta xeebaha ku yaal sida Kismaayo ay gacanta u
gashay Xunkii Masaarida, waxeyna xeebahaas ka talinayeen laga soo bilaabo 1875 ilaa 1887. Awooda Masaarida waxaa waqtigaas wiiqay
dagaalkii Mahdiyiinta oo kaga furnaa dalka Suudaan. Wadanka Masar taariikh ahaan waxaa soo xukumay dowlado xoog weyn oo reer
Masara ah, kuwaas oo jirey 3200 ka hore dhalashadii diinta Kirshtaanka, dabadeedna waxaa qabsaday Pershiya (Iran) sannadkii 525
dhalashada Kirishtaanka ka hore, waxaana ka sii qabsaday Greek sannadkii 332 dhalashada Kirishtaanka ka hore, sannadkii 51 dhalashada
Kiristaanka ayaa waxaa qabsaday Roomaanka.Masaaridu sannadkii 636 ayaa lagu daray xukunka Islaamka, lana baray afka Carabiga,
waxeyna noqotay dowlad Carbeed oo madax banana sannadkii 878. Sannadkii 1517 ayey ka mid noqotay xukunkii Cusmaaniyiinta ee Khaliif
Cusmaan oo ka soo jeedey waddanka Turkiga. Waxeyna Masar gacanta u gashay Ingriiska sannadkii 1882. Kadibna wuxuuna Ingriisku
boqortooyadii Cusmaaniyiinta dumiyey sannadkii 1914, wuxuuna maser ka sameeyey boqortooyo hirgashay sannadkii 1922.
Dalka Turkiga oo ay ka soo jeedeen Cusmaaniyiinta taariikh ahaan waxaa soo xukumay Greek inta u dhexeysey 200-1200 BC, waxaana
xukunka ka qabsaday Pershiya inta u dhexeysey 546-334 BC, dabadeedna waxaa qabsaday Roomaanka sannadkii 133 BC. Burburkii
Romaanka kadib reer Turkiya waxey isku xukumayeen hab qabiil. Dabadeed sannadkii 1243 waxaa qabsaday Mongoils, waxaana ka
qabsaday xukuumadii islaamka ee boqortooyadii la magacbaxday Cusmaaniyiinta. Boqortooyadaas Islaamka waxey ka qeyb gashay
dagaalkii kowaad ee adduunka, waxeyna xulafo ahaan la barbar safatay Germany. Markii looga adkaaday xulafadaas dagaalka ayey
burburtay boqortooyadaas oo dalalkii ay xukumeysay oo dhan sida Masar waxaa la wareegey xulufadii ku adkaatay dagaalkii Kowaad ee
Inkastoo Soomaalida xiligaas u ku riyaaqeen jiritaanka madaxbanaanideeda oo intooda badan aysanba war ka hayn in xeebahooda ay
xukuumado Carbeed ka talinayaan, haddana dowladahaas Carabeed Soomaalida kulama dhaqmeyn qaab isticmaar ku dhisan oo waxey ku
ekaayeen xeebaha oo ay ku ilaalsanayeen danahooda ku dhisan ganacsiga maraakiibta. Soomaalidu oo dhaqan ahaan aad uga duwnaa
carabta ayaa markii ay xiriir ganacsi dhexmaray waxay Soomaalida u soo horseedeen habka qabaliyadda oo waayihii danbe Soomaalidu
qeybiyey cududooda. Carabtu waxay kaloo Soomaalidu u horseedeen marin ay soo maraan Gumeysigii Yurub. Wadamada Carabta ka hor
Soomaalidu waa isku duubneyd, dulaankana wadajir ayey u wada qaadi jireen sida kii Gaalkacyo looga kiciyey Gaallaha ama kii lagu qaaday
Booranta ee ka dhacay Baali iyo Sidaamo. Soomaalida waxaa ku dhacay jabkii labaad markii ay soo baxeen qabiilo bilaabay iney ku
abtirsadaan Carabta, qaarka kalana ay isdifaacid u galeen sinji Afrikaan ah, qaarna ay ku dadaaleen iney isir la wadagaan cadowgii
Soomaaliyeed ee Xabashida.Waxaa intaas ka darneyd markii Soomaalida qabiil walba uu iskiis u sameystay boqortooyo u gooniya, taasna
ay kaga daydeen dhaqanka Carabta oo dhul walba oo yar uu ka talinayey suldaano isku wada heyb ah.
Wadamadii Islaamka ee xukumayey xeebaha Soomaaliyeed waxey heshiis la galeen dowladihii Yurub, sidaas ayey Masar ugu wareejisey
Ingriiska xeebihii Soomaaliyeed oo ay xukumeysay, sidoo kale Boqortooyadii Zanzibaar waxey talyaaniga gacanta u gelisay xeebihii ay ka
talineysay. Soomaalidu wax war ah kama aysan haynin gacan is weydaarsigaas xeebahooda lagu milki wareejinayey, mana jirin wax dagaal
ah oo Carabtaas ay la galeen gumeysteyaashaas reer Yurub ineysan qabsan Xeebahaas Soomaaliya.
British oo daneynayey inuu helo mariin nabadeed ee uu u maro Asia ayaa bilaabay markuu sandku ahaa1840 inuu heshiis la galo Suldaankii
Tajura ee xeebaha Soomaalida Djibouti, ka dibna wuxuu heshiis la galay madaxdii qabiilada Soomaaliyeed ee degeneyd xeebaha waqooyiga
Soomaliyeed sannadkii 1886 isagoo u ballan qaaday inuu dadkaas damaanad gelinayo oo uu wakiil uga noqonayo aduunka kale si ay uga
badbaadiyo cid kale oo qabsata. Ingriiska wax mariin ka baxasn ujeedadiisu ma ahayn, wuxuuna doonayey inuu India uga soo gudbo
kanaalka Suez. Waxey ahayd shirkadii loo yaqaaney The British East India Company oo ku qasabtay Ingriiska iney u sameyso dekedo ku
yaala xeebaha waqooyi ee Soomaalida oo ay shuruud la’aan uga sameystaan meelo ay ku xirtaan, kana helaan sahayda cuntada iyo
keydad kale. Ingriisku wax dan ah kama lahayn Soomaalida iyo ismaamulka gudaheeda. Waxaa dareenka Ingriiska soo jiitey waa halgankii
dheeraa oo uu halyeygii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan uu la galay Ingriiska. Halgankii Darawiishta ayaa cagta mariyey Ciidamadii badda
iyo dhulka ee uu lahaa Ingriisku, markaas ka dib waxey Ingriiska ku qasabtay inuu u soo jeesto guddaha Soomaalida, wuxuuna Ingriisku go’
aansaday inuu dayaaradihii ka soo laabtay dagaalkii 1aad ee aduunka sannadkii 1919 oo ahaa DH9 inuu ku weeraro Daraawiishta isagoo
Sayidku ugu yeeray “Mad Mullah” wadaadkii waalnaa, wuxuuna qorshahaas fuliyey January 21th, 1921 oo uu ku burburiyey xaruuntii ugu
weyneed ee Taleex. Jebinta Daraawiishta Sayidka ma ahayn oo keliya dayaaradihii Ingriiska, ee waxaa horey xoogiisii u wiiqay dagaaldii
sokeeye ee uu ku dhisnaa qabiilka ee uu la galay qabaailkii deggenaa waqooyi iyo waqooyi -bari Soomaaliya. Ingriisku markaas wixii ka
dambeeyey wuxuu u soo jeestey inuu gumeysto Soomaalida ku nool Waqooyiga.
Talyaaniga ayaa gacan ka helay Suldaanka Zanzibaar oo xiriir ganacsi uu horay u dhex maray, waxeyna boqortooyadaas ay ku wareejisay
Talyaaniga sannadkii 1885 xeebaha koofurta Soomaaliya, sidoo kale talyaanigu sannadkii 1889 wuxuu heshiis la galay boqortooyadii
Majeerteenka oo ogolaatay iney hoos timado maxmiyada Talyaaniga oo u balan qaaday hanti, hub iyo inuu kor ka difaaco. Sannadkii 1897
ayuu Talyaanigu la galay heshiis Xabashida iyo Ingriiska, kaas oo qeexayey sameynta sohdin u dhaxeysa dhulalka Soomaalida iyo Ethiopia.
Talyaaniga oo Soomaalida u soo aadey inuu lacag ka sameeyo dhul beereedka hodanka ah Soomaalida ee ku dhow labada webi ee
Shabeele iyo Juba ayaa Ingriiska dagaalkii 1aad kadib abaal marin ahaan kaga codsadey in Dhulka Soomaaliyeed ee ka shisheeya webiga
Juba uu ku soo wareejiyo si Talyaaniga oo faqri ahaa uu halkaas uga helo cunto uga soo baxda beerahaas.
Talyaaniga waxaa sannadkii 1924 lagu wareejieyey Jubada hoose oo markaas ka tirsaneyd maxmiyada Ingriiska uu ku hayey Kenya. ayuu .
1925 ayaa Talyaanigu burburiyey Boqortooyadii Majeerteenka. Talyaanigu wuxaana dadkii la shaqeeyey ku abaalmariyey inuu u soo
masafuriyo magaalada Kismaayo sannadku markii uu ahaa 1927. Talyaaniga ayaa wuxuu bilaabay inuu madaxdii qabiilada Soomaaliyeed oo
ugu yeeri jiray “Capo Cabilla”ayuu laaluushay una qoray lacag iyo hub si uu u dego gudaha Soomaaliya. Wuxuu hub iyo lacag siiyey
boqortooyadii ka jirtey Waqooyi Bariga Soomaaliya si ay u wiiqaan halgankii uu Sayidku waday inta uusan burburin boqortooyadaas. Sidoo
kale wuxuu Cabsi weyn ka qabey Soomaalida degta Gobolada dhexe oo uu u arkayey kuwo ay ku dheertahay wadaniyadda, wuxuuna
doonayey inuu dareenkooda ka jeediyo tacadi faraha badanaa oo Talyaanigu ka waday koonfurta Soomaaliya. Wuxuu ogaa ineysan
Soomaalidu jecleyn xabashida, isagana waxaa ku jirey damaci uu ku doonayey inuu ku qabsado Ethiopia. Talyaanigu wuxuu gobolada dhexe
la yimid siyaasad dabacsan oo ka duwan tan ka jirtey koofurta Soomaaliya, wuxuu ka sameystay gobolada dhexe xaruumo ciidan, wuxuuna
ka qortay ciidan gaaraya ilaa 60 kun oo uu lacag iyo darajaba siiyey. Wuxuuna ciidankaas horjoogeyaal uga dhigay saraakiil yar oo Talyaani
ah. Xilligaas sarkiil Talyaniya ayaa lagu diley gobolada dhexe laakiin Talyaanigu kama qaadiin wax tilaabo ah. Inkastoo Talyaaniga ugu
xanuun badnaa sarkaal sare oo Soomaalidu uga dishey degmada Ceel Buur.15kii Janaayo 1935 ayuu Talyaanigu duulaan ku qabsaday
Ethiopia iyadoo Soomaalidii badankood laga dhigay wax dagaalkii ku dhintay ama ku dhaawacmay. Talyaaniga oo is mahdiyey ayaa June
1940 ayaa haddana wuxuu guluf dagaal ku qaaday Ingriiskii xukumayey waqooyiga Soomaaliya, isaga oo markaas watay ciidamo
Soomaaliyeed oo fara badan, kuwaas oo uu ka soo qortay bariga Soomaaliya. Dagaalkaas wuxuu keenay in Ingriiska laga raacdeeyo
goboladaas waqooyo. Talyaaniguna wuxuu markaas fursad u helay inuu Dhamaan dhulka Soomaaliyeed gacanta kuwada dhigo, marka laga
reebo Djibouti iyo NFD. Ingriiska oo markale soo rogaal celiyey isagoo isna wata ciidamo u badan Kenyaan, Ugandhees iyo Asian ah ayaa
Talyaaniga dhamaan kawada qabsaday Geeska Afrika bilowgii sannadkii 1941.
Gumeysigii Yurub Soomaalida wuxuu u keenay inuu hub isugu dhiibo oo ay u dagaalamaan qolo dano gaara ku heysata Gumeysiga iyo kuwa
diidan, sidoo kale waxaa waxaa soo galay cuduro aan horay loo aqoon sida Jabtada, Isfiilitada, iyo kuwo kale ee la xiriira cdudurada
dhalmada. Kumanaan Soomaali ah ayaa ku geeriyoodey wax gumeysiga u hiillinayay iyo kuwa ka soo horjeeday. Odayaashii Soomaaliyeed
ma aysan la saan qaadi Karin tabtii ay maleegayeen reer gumeystayaashii reer Yurub, waayo aqoon iyo farsamaba way ka horeeyeen.
Odayaasha kama ahayan hanti ak qaata gumeysytayaasha oo dhulka gaalo gacanta u geliya kama ahayn, waxaynan fahmin waxaa looga
jeedo “maxmiyad”. Waayo waxaad ka garaneysaa marka ay ku doodayaan inaan laga tala warsan maamulka ku aaddanaa dalkooda iyo
dadkooda iyo heshiisyada ay wadamadaas la geleen dalal kale iyagoo ka wakiila danaha dadka la xukumayo.
Ingriiska oo gacanta ku dhigay dhulka Soomaalida oo dhan marka laga reebo Djibouti oo gacanta ugu jirtey Fransiiska ayaa dagaalkii 2aad
ee adduunka kadib maamul military Ingriisa ku xukumay Soomaalida. Wuxuu Muqdisho ka sameeyey maamukaas milateri 26dii February
1941, wuxuuna sameeyey ciidamo Soomaaliyeed oo loo yaqaan Ilaalda. Walaaca ugu weyn oo uu qabey Ingriisku waxey ahayd sidii uu
Soomaalida uga dhigi lahaa hubka faraha badan oo ay ka kala heliin labdii dagaal adduun weyne ka dhacay, uuna u soo celin lahaa kala
dambeynta iyo ku dhaqanka sharciga. Ingriiska wuxuu ku guuleystay inuu isbedel ku abuuro bulshada iyo siyaasda Soomaalida. Wuxuuna
abuuray dugsiyo waxbarasho, adeegyo caafimaad, horumarinta adeega beeraha iyo daryeelka beeraleyda. Wuxuu ogolaaday in Soomaalida
ay buuxiso jagooyinka hoose ee maamulka iyo ciidamadaba oo idil. Wuxuu kaloo ku bedeley caaqiladii uu Talyaanigu soo dortay kuwo ay
qabiildu soo xushan iyo aqoon yahano Soomaaliyeed oo wada maamulka degmooyinka iyo magaalooyinka.
Markii dagaalkii 2aad ee addunka looga adkaaday dowladii Fashistaha Talyaaniga ayaa Muqdisho waxaa ka soo baxay kooxo Talyaaniya oo
afkaartoodu ku saleysan tahay mabaadii’da Hantiwadaaga, kuwaas oo jaraaidka iyo raadiyaasha adduunka aad ula socdey, una badnaa
dad ka soo baxay jaamacadaha Talyaaniga oo ka soo cararay caburinta kelitaliskii Musellini. Ingriiska wuxuu kooxahaas Talyaaniga u
ogolaaday iney abaabushaan xisibiyo siyaasadeed kuwaas oo la socdey kuwa ka abuurmay Talyaaniga. Kooxahaas aqoonyahankaa waxey
saameyn ku yeesheen dhalinyaradii Soomaaliyeed ee guryaha uga shaqeyneysay oo luqada ku hadli yaqaana laakiin aan aqrin karin
wararka jaraaidka ama aan aqoon u lahayn radiyaasha ugu waaweyn caalamka. Sidoo kale waxey kooxahaas saameyn ku yeesheen
shaqaalihii rayidka Soomaaliyeed oo ka shaqeynayey xaafisyada maamulka dowlada. Waxey kooxahaas soo akhrisan jireen jaraaidka
caalamka, waxeyna soo dhageysan jireen wararka raadiyaasha caalamka, markaas ayey u tabin jireen saaxibadooda Soomalliyeed. Ingriiskii
wuxuu daremay in Ururada Talyaaniga, iyo kuwa Carabta ay u ololeynayaan soo noqoshada Talyaaniga, mararka qaarna ay si xoogan uga
hor imaanayaan xukunka Ingriiska. Ingriiska waxey dantu biday inuu xulufeysto Soomaalida, wuxuuna ku dhiiri geliyey Soomaalida iney
sameystaan xisibiyo siyaasadeed.
Dhalinyarada Soomaaliyed ee xiligaas ma aysan lahayn wax aqoona oo ay ka barteen hab waxbarasho, laakiin waxey iskood isku barteen
sida loogu hadlo luqada Ingriiska, Talyaaniga iyo Carabiga. Waxeyna intooda badan ku shaqeysan jireen turjubaan ama iney ka adeegaan
xaafiisyada, guryaha iyo ganasiga gumeysteyaasha. Sidaasna dhalinyaro badan waxey ku kasban jireen kalsoonida gumeysteyaasha,
waxeyna inta badan heli jireen wararka sirta iyo la socodka waxa ka dhacaya dunida inteeda kale. Talyaanigu wuxuu ku dadaalay inuu
Soomaalida ka cuuryaamiyo dhinaca aqoonta iyo dhaqaalaha si aysan u haweysan is xukun. Waxaa kaloo Talyaanigu uu ku hayey
Soomaalida xukun adag oo aan u ogoleyn iney wax abaabulaan ama ay wax horumar leh ay ku sameystaan. Wuxuuna arrimahaas u
adeegsan jirey boolis Soomaliyeed iyo odayaasha dhaqanka oo gumeysgu naas nuujin jirey, kuwaas oo wixii wararka gudaha u soo tebin
jirey. Markii Talyaaniga laga saaray koofurta, dhalinyaradaas waxey dareentay nefis ay ku kulmi karaan oo ay afkaar isku weydaarsan
Sannadkii 1942 ayey dhalinyaradii waxgaradka ahyad bilaabeen wadatashiyo ku saabsan adduunka mowjadaha siyaasadeed oo wadama
badan ka kacsanaa, waxeyna is tuseen iney sidaas oo kale dalkooda mowjado gumeysi diid ah uga kiciyaan. Kulamadoodi wuxuu jiitamay
waqti dheer waayo waxaa aad u yareyd is aaminka, waxaana adkaa sidii loo kala saari gumeysi la jireenka iyo xornima u dirirka ee
dagaalamaya madaxbanaanida Soomaaliyeed. Ugu dambeystii waxaa la is tusay in dhalinyaro kooban oo is aaminsan is xulato, sidaasna
waxaa isku xushay koox dhalinyaro ah oo gaareysa 13 xubnood waxeyna ku shireen Xamar 13 Maajo 1943. Dahallinyaraasi waxeyna is
tuseen barnaamijka ururkooda oo aan lahayn qorshe siyaasadeed oo xambaarsan fikrado culus. Ururka waxaa hor boodayey karaani
magaciisu ahaa Cusmaan Yaasiin oo ka soo jeeda gobolada Bari, wuxuuna ururka u xushay dad isaga uu la lahaa gacan saar, wuxuuna
madax uga dhigay shaqsiyaad aan ka soo jeedin qabiilada waaweyn, isaguna wuxuu isku magacaabay xoghayaha guud. 15 Maajo 1943
ayey ogolaasho ka dalbadeen Ingriiska, isla maalintiina Ingriisku wuxuu siiyey ruqsada ururkooda la magic baxay naadiga dhlainyarada
Soomaaliyeed (Somali Youth League). Ingriisku si uu u xoojiyo ururkaas wuxuu ku soo biiriyey aqoon yahankii Soomaaliyeed ee xukuumad
iyo ciidankaba ku jirey, taasna waxey dhalisay in ururkii uu magaciisu soo shaac baxo. Si kastaba ha ahaate ururku wax horumara ma gaarin
4 sanno, waxaana la is tusiyey in qabiilada waaweyn ay hogaanka ururka wax ka qabtaan si waxqabad loogu tilaabsado, waxaana la isla
gartay inu jagada xooghayaha guud loo dhiibo Mudane Cabdulaahi Ciise Maxamuud oo markaas heystey Hamar Youth Club, Beldweynana u
fadhiyey faraca ururka dhalinyarada Soomaaliyeed. Cabdulaahi Ciise si naftihurinimo leh ayuu Soomaalida daacadnimo ugu shaqeeyey
wuxuuna ku guuleystey biishii Maajo 1947 im magaca ururka laga dhigo xisbi siyaasiya una halgamaya madax banaanida dhulka
Soomaaliyeed oo dhan, doonayana in Soomaalida waxbarasho casriya la siiyo. Mudane Cabdullaahi Ciise dadaal weyn u galay inuusan
xisbigu ku shaqeyn qabyaalad ama madahab gaara ah, wuxuuna ka furay xisbiga dhamaan dhulalka Soomaaliyeed. Mudane Cabduulaahi
Ciise fikradha uu soo kordhiyey waxaa ka mid ahaa inaan Talyaaniga loo soo celin Soomaalida. Waayo Talyaanigu aad ayuu u maamul
xumaa, iyo in halganku uu ahaado mid siyaasadeed iyo mideynta Soomaaliweyn in lagu doono si nabada ah.
Shirkii Potsdam oo dhacay sannadkii 1945 ayna qabteen wadamadii ku guuleystey dagaalkii 2aad ee adduunka, waxey soo saareen in
Talyaaniga lagala wareego dhulalkii uu gumeysanayey ayna ku jiraan gacanta xulafada oo ka koobneyd Mareykanka, Ruushka, Fransiiska iyo
Ingriiska. Ingriiska oo la dhacsanaa afkaarta xisbiga Leegada ayaa wuxuu soo jeediyey in Soomaalida dhulkeeda oo dhan hal wadan loo
wada dhiibo, uuna jeclaan lahaa in isaga lagu aamino. Aragtidaas waxaa diidey dowladihii kale oo u arkayey Ingriisku inuu tiisa keliya
fushanayo. Mareykanku wuxuu difaacayey Ethiopia oo u balan qaaday saldhig ciidan iney dalkeeda ka siiso Mareykanka, Ruushku wuxuu
dareensanaa iney dabeylo hantiwadaaga ka dhacayaan wadanka Talyaaniga, wuxuuna taageersanaa in la soo celiyo maamulkii Talyaaniga,
Faransiiska isagoo naceyb soo jiitamayey u qabey Ingriiska. Wuxuu kaloo daneynayey in Talyaaniga la soo celiyo.
Sannadkii 1945 ayaa boqorkii Xabashida Haile Selassie wuxuu codsaday in isaga dhulka Soomaalida oo dhan lagu soo wareejiyo. Xulafadii
go’aan mideysan way wada gaari waayeen, waxeyna go’aansadeen arrinta in loo gudbiyo golaha guud ee UNka. Goluhu wuxuu soo diray
wafdi xaqiiqoraadin ah oo yimid Xamar 11kii Janaayo 1948, waxeyna Leegadii codsatay in loo ogolaado iney sameeyaan banana bax ay ku
muujinayaan taageradooda. Waxaa dadaalka Leegada carqalad ku noqday kooxo Taliyaaniya, oo ay wehliyeen Carab iyo dhuuniqaatayaal
Soomaaliyeed oo dhan ka soo wada jeeday. Halkaasna waxaa ka dhacay iska horimaad uu ku dhexmaray Soomaalida iyo Talyaaniga,
waxaana goobtaas ku dhintay 51 Talyaaniya iyo 24 Soomaaliya. Dadka Leegada laga diley waxaa ka mid ahayd gabadhii Soomaaliyeed oo
magaceedu ahaa Xaawo Cusmaan Taako. Wafdigii xaqiiqoraadinta waxey warbixin ka dhageysteen saddex kooxood: leegadu waxey
codsatay in guddi ka kooban afarta quwadood ee ku adkaaday Dagaalkii 2aad loo dhiibo Soomaalida mudo dhan 10 sanno. Aden Zoppe oo
horkacayey ururka Xisbiya ayaa soo jeediyey in Talyaaniga la soo celiyo dalkana loo dhiibo mudo 30 sanadooda. Kooxda saddexaad waxey
ka koobnayeen Talyaani iyo Soomaali isku jira ah waxeyna codsadeen in la soo celiyo maamulkii Talyaaniga. Wafdigii waxey qateen fikradii
Leegada laakiin afartii wadan oo waaweyneed waa diideen. Ingriiskii ma dooneyn in Soomali darted uu ula dagaalamo xulafadiisa, wuxuuna
ka niyad jabay markii aysan SYL aysan codsan in Ingriiska loo dhiibo dhulka Soomali oo dhan. Sebtember 1948 ayey Mareykanka iyo
Fransiisku waxey shir ugu qabteen Paris si ay Ingriiska u ogoleysiiyaan inuu aqbalo in Soomalida loo dhiibo Talyaaniga, arrintaasna waa uu
ka yeelay. Ethiopia waxey cadaadis ku saartay Ingriiska iyadoo u soo mareysa Mareykanka in Howd iyo Galbeedka Soomaliya uu gacanteeda
ku soo wareejiyo. Waxey kaloo Ethiopia ay bilowday iney Soomaalida ku hubeyso Ingriiska ayna ku noqdaan shufto si Ingriiska uu uga baxo
dhulkaas. Dhibaato muddo dheer soo jiitameysey kadib ayaa wasiirkii arrimaha dibeda Ingriisku oo ahaa Mr. Bevin wuxuu dhulkaas u
gacangeliyey Xabashida Oktoober 1948, ka dib markii ay Xabashida sinnaba u diidey iney ka tanaasusho sheegashada dhulkaas. Wuxuuna
siiyey lacag laaluusha madaxdii qabiilada Soomaaliyeed wuxuuna uu ku magac bixiyey magdhowgii dagaalada oo ay Soomaalidu u taqaan (
Waxaa New York ka bilowday Sebtember 1949 kalfadhigii golaha loo dhan yahay ee Qaramada midoobey oo ay hor boodayaan wadamadii
ku guuleystey Dagaalkii 2aad ee Aduunka oo intooda badan gumeysta wadamo kale.Talyaanigu wuxuu beerdulucsi la galay UNka wakiiladii
dalalka kale u fadhiyey wuxaana si gaara uga dhaadhiciye wadamada Carabta in Liibaya xoriyad dhaqso u siinayo haddii ay u codeeyaan in
maamulkiisa lagu celiyo Soomaaliya, sidoo kale wadamada Yurub wuxuu ku beerdulucsaday iney hanti badan ka gashay Soomaliya uuna
yaqaano sida loola dhaqmo dadkaas. Waxey Leegadu ka war heshay in wadamada xooga weyn ay doonayaan in la soo celiyo xukunkii
talyaaniga. 5tii Oktoobar 1949 ayey Leegadu ku sameysay mudaharaad ka dhan ah Talyaaniga oo Soomaalidu kadib u bixisay Dhaxtuur,
waxaana meesha isla markiiba yimid booliska Ingriiska kuna amray leegada iney kala dareeraan, waxaana loogu jawaabey dhagax tuurya
ah ee askartii lala beegsaday. Askartiina waxey furtay rasaas ay ku dhaawacday qiyaasta 50 qofood disheyna laba Soomaaliya. Meesha
waxaa Ingriiskii aga dhaawacantay afar askari, dadka meeshaas ku dhaawacmay waxaa ka mid ahaa Mudane Abshir Kaahiye oo ahaa
dhallinyaradii horkacaysay muda-haraadka maalintaa loo yaqaan Dhagaxtuurka.
21 November 1949 ayaa waxaa codbixin UNka u qaaday arrinta Soomaalida, waxaana codku u batay in Talyaani uu soo noqdo.
Cabdulaahi Ciise oo markaas joogey New York wakiilna ka ahaa xisbiga Leegada waxaa ku dhacay argagax iyo qaadashawaa iyo inaan
Taladoodii haba yaratee aan la tixgelin. Wareysi uu Mudane Cabdullahi Ciise bixiyey wuxuu si kulul u cambaareeyey sida looga hiileyey
xuquuqdooda loona taageeray siyaasadii ay wada jirka u wateen labada wasiir ee arrimaha dibeda ee dalalka Ingriiska iyo Talyaaniga oo
kala ahaa Mr. Bevin iyo Signor Sforza. Wuxuuna sidoo kale muujiyey kooxihii carabta ee Soomaalidu isku haleyneysay sida ay Talyaaniga
dano hoose ula meel dhigteen bedelkeedna Soomaalida ugu gacan geliyeen.
21 November 1949, ayuu isla markiiba Talyaanigu ku soo noqday Soomaaliya, wuxuuna isla markiiba bilaabay inuu caburiyo Leegada isaga
oo uga aargoosanaya diidmadooda ay diideen soo noqoshada maamulka Talyaaniga. Intii talyaanigu xukumayey dalka koofureed dad
badan oo ka tirsanaa ururka Leegada way isaga carareen dalka, waxeyna galeen wadamada Soomaaliya deriska. Mudane Cabdulaahi Ciise
wuxuu ashtako u tegey New York sannadkii 1953, waxaana loo ogolaaday inuu ka hadlo golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey
(UN). Mudunuhu wuxuuna jeediyey qudbad dheer oo uu kaga cabanayo cadaadiska maamulka Talyaaniga uu ku hayo xisbiga Leegada oo
ka midka yihiin: dil, caburin iyo xoriyad ka qaad. Wuxuuna sheegay in Talyaanigu uu damacsan yahay inuu sii dheereysto mudadii loo qabtay
isaga oo Talyaanigu aan dadka Soomaaliyeed waxba barayniin si uu qiil ugu helo ineysan Soomaalidu is xukumi Karin, yihiina dad sabool ah.
Sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyey inuusan Talyaanigu diyaar u ahayn inuu Soomaalida u diyaariyo sidii ay dalkooda u maamuli lahaayeen,
taasna uu ka door biday inuu heshiis la galo shirkada qoda batroolka iyadoon Soomaalida waxba lagala socodsiin. Mudane Cabdulaahi
Cabdullahi Ciisse wuxuu kaloo carabka ku dhuftay in Talyaaniga uu joojiyo qeybinta uu ku hayo koofurta Soomaalida oo uu Talyaanigu
doonayo in uu qeybiyo saddex dal oo yar oo ay kala xukumaan Hawiye, Majeerteen, iyo Raxanweyn, wuxuu kaloo soo bandhigay in
Talyaaniga meeshii uu wax ka bari lahaa dhalinta Soomaaliyeed ee loo baahnaa iney dalkooda aqoon ku xukumaan uu doorbiday
magacaabista odayaal dhaqameed maskaxdoodu ku weyntahay qabiilka. Wuxuu kaloo codsaday in calanka Soomaalida loo ogolaado in la
saaro ka hor xoriyada waana laga yeelay. Talyaaniga waxaa golahaas ka raacday sharafdarro iyo ceeb. Waxeyna goluhu isku raaciin
inuusan Talyaanigu waqtigii loo qabtay inuu Soomaalida ku gaarsiiyo xoriyad aan loo kordhineynin. Mudane Cabdulaahi Ciise oo guul badan
xambaarsan ayaa ku soo noqday dalkii, waxuuna uu saaray calanka Soomaalida 12 Oktoober 1954. Isla sannadkaas waxaa la qabtay
doorashooyinkii dowladaha hoose, waxaana aqlabiyad ku guuleystay Leegada.
Markaas wixii ka dambeysey Talyaanigu waa quustay, wuxuuna isbedel ku sameeyey siyaasadissa oo uu ku kordhiyey inuu soo dhoweeyo
Leegada. 29 kii February 1956, waxaana loo doortay raiisulwasere mudane cabdulaahi Ciise oo dalka gaarsiiyey xoriyad buuxda 1dii July
1960 halkaas oo ay ku dhalatay jamhuuriyadii Soomaalida. Mudane Cabdulaahi intuu hayey hogaanka dalka wuxuu soo bandhigay
dastuurka Leegada ee lagu dhaqayo Soomaalida kaas oo ay ka mid ahaayeen in Soomaalida meel kasta oo ay joogta iney leeyihiin xuquuda
muwaadinka ee Jamhuuriyada Soomaaliya, sidoo kale waxey dalbadeen in Soomaalida ku hoos nool gumeysiga loo ogolaado iney
ayaahooda ka tashadaan. Markii dalkii xoroobey waxaa hogaanka dalka qabtay Leegadii oo uu hogaaminayo Aden Cabdulle Cusman (Adan
Cadde) oo madax ka ahaa golihii baarlamaanka, waxeyna dowladihii Soomaalida ay af la garab istaageen NFD iyo Somaalida Galbeed
degaanadaas oo si gaara loogu tala galay idaacado gaara oo dadka ku baraarujiya iney u halgamaan aayahooda. Taasina waxey ku kaliftay
in Kenya iyo Ethiopia ay wadagalaan heshiis difaac oo ay uga soo horjeedaan Soomaliya. February 1964 ayaa waxaa dagaal uu dhexmaray
xabashida iyo Soomaalida kadib markii ay Xabashidu duulaan cirkaa ku soo qaaday degmooyin ka tirsan gudaha Soomaaliya, saddex bil
kadibna dagaalkaas waxaa joojiyey dhexdhexaadin ka timid Sudan iyo OAU.
Ilaa iyo Xilligan la joogo itoopiya waxay wadaa xadgudub iyo faragelin joogta ah ay ku wiiqeyso jiritaanka umadda Soomaaliyeed. Hase
yeeshee dadka Soomaaliyeed oo is diin, dhaqan, af intuba wadaagaan ayaa meel qura kaga soo wada jeedo difaaca iyo jiritaanka